အောက်တိုဘာလ 2018 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: အောက်တိုဘာလ 2018
နေအိမ် > အောက်တိုဘာလ 2018
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးရာသီဥတုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းအဘယ်သို့ဆိုရန်ခက်ခဲဒါဟာင်, ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးမိုးလေဝသနှင့်အတူဥရောပနိုင်ငံများရေးသားခြင်းစတင်ခဲ့သည့်အခါဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီချဉ်းကပ်ဖို့ဘယ်လိုမသိခဲ့ပါ. နောက်ဆုံးတော့, သောသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့, မ? ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာငါတို့စာတမ်းထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အတိတ်ကာလကျော် 10 နှစ်ပေါင်း, သန်းပေါင်းများစွာကမီးရထားယူသည်မည်မျှအကျိုးရှိနေသေးတယ်ပါပြီ! စိမ်းလန်းသော၏ကြွယ်ဝသောလယ်ကွင်း, တောက်ပကမ်းရိုးတန်း, နှင့်ယူနန်ပြည်နယ်၏တောင်တန်းကျောက်တန်းများကိုခရီးသွားဘရိုရှာများသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်များတွင်တစ်ခါမျှမဖော်ပြခဲ့ပါ. ရထားယူပြီးပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်, အဆင်ပြေ, နှင့်ပိုက်ဆံအိတ် - ဖော်ရွေလမ်း…